ပြင်သစ်သည် CFA ဖရန့်အားဖြင့်အာဖရိကကိုအမြတ်ထုတ်နိုင်မည်လော။ - Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်း
ပြင်သစ်နိုင်ငံ CFA ဖရန့်ကနေတဆင့်အာဖရိကလည်ပတ်
အဆိုပါပြင်သစ် CFA ဖရန့်ကနေတဆင့်အာဖရိက exploit မလဲ
MAmadou Koulibaly သည်ကိုလိုနီအတိတ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောလွတ်လပ်သောငွေကြေးတစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ Côte d'Ivoire အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကPresident္ဌနှင့်စီးပွားရေးပါမောက္ခ Mamadou Koulibaly သည်ပြင်သစ်ဖရန့်သို့ငွေလဲလှယ်မှုကြောင့်ဖရန့်ဇုန်၏အသင်း ၀ င်နိုင်ငံများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ယူရိုအပေါ်ယနေ့။ နယူးအာဖရိကမှ Ruth Tete နှင့် Soh Tadhieu တို့၏ဤတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် Mamadou Koulibaly သည်သူ၏စကားလုံးများကိုနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းမရှိဘဲကိုလိုနီအတိတ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောလွတ်လပ်သောငွေကြေးတစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းဆိုသည်။
Koulibaly: CFA ဖရန့်ဇုန်သည်ငွေကြေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသမဂ္ဂဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ထိန်းချုပ်မှုကိုပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကို ဦး စားပေးသောပဲရစ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤဇုန်၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောဂြိုဟ်တုနိုင်ငံများသည်အနောက်အာဖရိကနှင့်ဗဟိုအာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ဤဇုန်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏နောက်ခံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကစစ်အေးခေတ်ကာလအတွင်းအရှေ့ဥရောပပြည်နယ်များသည်ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံနှင့် ၀ ါဆောစာချုပ်မှတစ်ဆင့်မည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်။
ပြင်သစ်နှင့်ဖရန့်ဇုန်၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားငွေကြေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာမူများကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ကိုလိုနီစာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ဒီစာချုပ်ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလ ၂၃ ရက်တွင်ဗဟိုအာဖရိကနိုင်ငံများမှဘဏ်များ (BEAC) နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့အကြားငွေကြေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်နှင့်ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်တို့ဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ တွင်အနောက်အာဖရိကငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UMOA) နှင့်ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား။
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်လွတ်လပ်ရေးရရန်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုပြင်သစ်ကလက်မခံမီ ၄ င်းတို့အားနိုင်ငံခြားသုံးငွေ၏ ၆၅% ကိုပြင်သစ်ဘဏ္Treာရေးစာရင်းတွင်သတ်မှတ်ထားပြီး fr CFA ။
ဤငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားဗဟိုဘဏ်များထံအပ်နှင်းထားသော်လည်း [BEAC နှင့် BCEAO, note]၊ ဤဘဏ်များသည်အာဖရိကတိုက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်တွင်၎င်းတို့တွင်အာဏာမရှိသောကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသောကြီးမားသောဗျူရိုကရေစီယန္တရားများသာဖြစ်သည်။ သူတို့ကပြင်သစ်ဇုန်၏နိုင်ငံများကသူတို့ကံကြမ္မာကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စေရန်ထိုတွင်ရှိနေသည်။
ဤငွေကြေးဆိုင်ရာသမဂ္ဂသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်ဖရန်ဇုန်၏နိုင်ငံများ၏ဘဏ္theာရေးအခြေအနေကိုသင်မည်သို့ဖော်ပြမည်နည်း။
Koulibaly: ပြင်သစ်ဇုန်သည်အချေအတင်ငြင်းခုံမှုများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြည်ထောင်စုသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စျေးကွက်၏ကြီးမားသောအားသာချက်များကိုဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့သည်ကိုမမေ့သင့်ပါ။ ပြင်သစ်ဇုန်၏ငွေကြေးအခြေအနေသည်ပြင်သစ်၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုကာကွယ်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်များရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ပြင်သစ်ဇုန်အတွင်းရှိပြည်နယ်များ၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုသိုက်ပြင်သစ်ဘဏ္asာရေး၏ဘုံအကောင့်ထဲမှာထားရှိပေမယ့်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမျှဤမျှခက်ခဲ - ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံက၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ပြောနိုင်ပါဘူး။ ပြင်သစ်တစ်နိုင်ငံတည်းသာဤသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူခွင့်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ဤ“ ရန်ပုံငွေများ” တွင်ထည့်သွင်းထားသောဤရန်ပုံငွေများသည်သူတို့၏ပမာဏသည်သက်ဆိုင်ရာအာဖရိကနိုင်ငံများ၏သွင်းကုန်လိုအပ်ချက်ထက်ကျော်လွန်တိုင်းအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤငွေပေးငွေယူအကောင့်များသည်ပြင်သစ်နှင့်ဖရန့်ဇုန်၏နိုင်ငံများမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောငွေကြေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်များ၏သီအိုရီအရသီအိုရီအရအကန့်အသတ်မရှိ overdraft ၏နိယာမနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ သို့ရာတွင်ပြင်သစ်အာဏာပိုင်များသည်အာဖရိကဗဟိုဘဏ်များ၏ပြဌာန်းချက်များတွင်ငွေပေးငွေယူအကောင့်များကိုအကြွေးတင်သူများဖြစ်လာခြင်းမှကာကွယ်ရန်တခါတရံကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
CFA ဖရန့်နှင့်ဆက်နွယ်သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်လျှို့ဝှက်ပြီးပြင်သစ်ဘဏ္Treာရေးဌာနကသာစစ်ဆင်ရေးအကောင့်များ၌ထည့်ထားသည့်ဖရန့်ဇုန်၏နိုင်ငံများသို့ရန်ပုံငွေပမာဏကိုသာသိသည်။ ပြင်သစ်ဘဏ္Treာရေးဌာနမှသာလျှင်လုပ်ခလစာနှင့်ငွေစာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေများကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းစနစ်သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော၊
ပြင်သစ်ဇုန်၏စီးပွားရေးသည်အလွန်အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ CFA ဖရန့်များ၏စစ်ဆင်ရေးယန္တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအချိုးမညီဖြစ်ကြသည်။ ပြင်သစ်ဇုန်၏ဆုံး spendthrift နိုင်ငံများတွင်ပိုပြီးရှေးရိုးစွဲစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသည်သောနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုသိုက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ တကယ်တော့ငွေကြေးအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းနှင့်အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများတွင်များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်အားပေး။ တည်ငြိမ်သောနှင့်စုစည်းငွေကြေးစနစ်၏တည်ရှိမှုပြင်သစ်ဇုန်၏အာဖရိကနိုင်ငံများအတွက်ထိရောက်သောဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်၏ပေါ်ပေါက်ရေးမှဦးဆောင်မထားပါဘူး။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ 107 42 ရှိသည်သော 1990 ဘဏ်များအတွက်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ဘဏ်များအပေါ်ထို့နောက်အကြီးအကျယ်မှီခိုထားကြပါတယ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်များ, ။
ပြင်သစ်အကြီးအကျယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသူတို့ရဲ့နည်းလမ်းထက်ကျော်လွန်သည့်ဖရန့်ဇုန်၏နိုင်ငံများတွင်အားပေး။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးသည့်သူ၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုသိုက်ပြင်သစ်နှင့်ဂါနာတွင်တည်ရှိသည်နေကြသည်ဂါဘွန်, အကြားရှိအဘယ်အရာခြားနားချက်ဖြစ်သနည်း ဒါမှမဟုတ်ကင်မရွန်းနှင့်ကင်ညာအကြား? ဘီနင်နှင့်တူနီးရှား? ဤမေးခွန်းများကိုပြင်သစ်ဇုန်၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်. တရားဝင်မေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။
Koulibaly။ ကျနော့်အမြင်တွင်၊ ဤအချက်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်ပြင်သစ်ဘာသာစကားပြောသောနိုင်ငံများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အုပ်စုတစ်စုသည်၎င်းတို့၏ရပ်တည်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အောက်ပါအငြင်းပွားမှုများကိုအသုံးပြုကြလျှင်ပင်၊ ခြိုးခြံခြွေစနစ်သည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအန္တရာယ်ကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ပချိန်ခွင်လျှာညီမျှမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊
အဆိုပါ CFA ဖရန့်ကိုထောက်ခံသူတွေပြင်သစ်ဇုန်ကနေဆုတ်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီအာဖရိကနိုင်ငံတွေအပေါ်အဆက်ဆက်ပြင်သစ်သမ္မတကြိုးပမ်းခဲ့တယ်သောနိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဖိနှိပ်မှုကိုမြင်ရဖို့မဟန်ဆောင်။ ပြင်သစ်အကျိုးစီးပွားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမကြာသေးမီကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ဂျာ, မာလီအတွက်ရွှေယူရေနီယံအပေါ်အကျပ်အတည်း, ချဒ်ရေနံကျနော်တို့မဆိုသည့်စနစ်လွတ်မြောက်ခြင်းအရိပ်အမြွက်တိုတိုဖြတ်ဖို့ဖိနှိပ်ဆောင်ရွက်မှုများကိုမျက်မြင် , ကုန်ကြမ်းများနှင့်ရဝမ်ဒါအခြားအကျပ်အတည်းများ, ကွန်ဂိုနှင့်ဆီနီဂေါ၏ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းခံရဖို့ရှိပါတယ်ရာအိုင်ဗရီကို့စ်အတွက်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ, မှအစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်း။
ဆီနီဂေါမကြာသေးမီကကြောင့်စိန့်လူးဝစ်၌ပါသောဆီကိုတွေ့ဖူးထုတ်ပြန်ကြေညာသောအခါ, တိုင်းပြည်သည်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကူညီပေးဖို့ဗင်နီဇွဲလားဟုမေးလျက်နှင့်မပြင်သစ်မှသိရသည်။ ပဲရစ်တစ်ဦးသစ္စာဖောက်များနှင့်ပြင်သစ်နှင့်ပြင်သစ်ဇုန်၏နိုင်ငံများနှင့်ယင်း၏အရင်းအမြစ်များကိုအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်များချိုးဖောက်အတိုင်းဤလုပ်ရပ်မမြင်စဖူး။
သူတို့ဟာပြင်သစ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူနှစ်စဉ် file နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုသိုက်၏ 65% နှင့်အတူ, ပြင်သစ်မှပြည်နယ်အခွန်ထမ်းလျှော့ချခံရအာဖရိကပြည်နယ်များကြည့်ဖို့အကြောင်းအရာများမှာ! သို့သျောလညျးကြှနျတျောတို့နိုင်ငံသားများ, အခြားပြင်သစ်အခွန်ထမ်းများကခံစားအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိပြင်သစ်နိုင်ငံသားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဤသည်ကိုသူတို့ပြင်သစ်မပါဘဲလုပ်နိုင်ယုံကြည်ဖို့လူဦးရေနှင့်စီးပွားရေးကစားသမားလှုံ့ဆော်ပေးသောတစ်ခုတည်းသောဆန္ဒအလျောက်ကျွန်အဖွစျဖျောပွနိုငျတဲ့အခွအေနေ, စေပါတယ်။
ဒီအယူအဆကိုလုံးဝမှားယွင်းနေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုကျယ်ပြန့်သည်: င့်သူတောင်းစား၏ status လူတွေကိုလျော့နည်းစေမယ့်အခမဲ့နှင့်တာဝန်ရှိကုန်သွယ်ရေးမှတဆင့်နှင့်မနိုင်ငံခြားအကူအညီထဲမှာထည့်သွင်းချင်တယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့မတတ်နိုင်သောစနစ်ပိတ်မိနေကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း, ငါတို့အမြတ်ဆွဲမအခွင့်အလမ်းများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖန်တီးပေးပါတယ်။
ပြင်သစ်ဇုန်၏နိုင်ငံများ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးများ၏တစ်ဦးကအစည်းအဝေးအောက်တိုဘာလ 14 2007 အပေါ်ပဲရစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးအစဉ်အလာကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် IMF က၏ကျဆုံးခြင်းညီလာခံ precedes ။ သငျသညျ Cote d'Ivoire ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ရပြီနှင့်ဖြစ်ကောင်းသင်တို့သည်ဤအစည်းအဝေးများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ အတော်များများကအာဖရိကန်အာဖရိက၏လူတို့အဘို့အပြုသဘောဘာမှအစည်းအဝေးများပေါက်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဤစကားမှန်ပါသလော
Koulibalyဖြေ - ကျွန်တော်ဟာဘဏ္typeာရေး ၀ န်ကြီးဖြစ်တုန်းကဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးမျိုးကိုမတက်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ပြင်သစ်ဇုန်ရှိနိုင်ငံအများစုသည်အားနည်းနေသည်။ ယိုစီးမှုအတွက်ချွေတာမှုများနှင့်ဤအစည်းအဝေးများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်၎င်းတို့သည်အရေးမပါပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့စကားမပြောနိုင်သည့်အစည်းအဝေးများကိုသူတို့အဘယ်ကြောင့်ဆက်တက်ရောက်နေကြကြောင်းသိလိုပေမည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံတွေဟာပြင်သစ်ကသူတို့အတွက်အရာရာကိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာပြသနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များသည်အလုပ်အကိုင်၊ ၀ င်ငွေ၊ စုဆောင်းမှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအန္တရာယ်ပြုသည့်တိုင်စက်ရုံ၏အဖြေကိုရွေးချယ်လိုကြသည်။ ငါတို့ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုထောင်ချောက်ထဲကျတယ်။
သငျသညျအာဖရိကပြည်နယ်များအတွက် CFA ပြင်သစ်နိုင်ငံအခမဲ့ဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်အနည်းဆုံးသုံးအကြောင်းပြချက်အမည်ကိုနိုင်သလား?
Koulibalyပထမ ဦး စွာ CFA ဖရန့်သည်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ သူကပြည်နယ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ထိုအချိန်ကပြင်သစ်နိုင်ငံရေးသမားများအားလှူဒါန်းရန်ဖရန်ဇုန်၏နိုင်ငံများသည်အမြဲတစေတောင်းခံခြင်းခံရသည်၊ ၎င်းသည်တရားမ ၀ င်သောတာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤ“ လက်ဆောင်များ” သည်ပconflictsိပက္ခများစွာ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးအခြားအကျင့်ပျက်ခြစားမှုပုံစံများကိုလမ်းခင်းပေးသည်။
ဒါဟာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းရှိနေသော်လည်းပြင်သစ်ဇုန်၏နိုင်ငံများတွင်ပြင်သစ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ရှည်ဤဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အခွန်ထမ်းထံမှငွေနှင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကူညီပေးနေ၏ငာလက်အောက်တွင်ကြောင့်တရားမဝင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောပြင်သစ်နှင့်အာဖရိကတွင်နိုင်ငံရေးလူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းဤအချက်ကိုပြင်သစ်ဇုန်၏စွန့်ခွာချင်လာအောင်တွန်း။
တကယ်တော့, တင်းမာမှုများပေါ်ပေါက်ရေးနိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်ကအတွင်းပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၏ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းများငွေလဲနှုန်းစစ်အစိုးရ၏ရွေးချယ်မှုငွေကြေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အတူလုပ်ကတိကဝတ်များ၏ system ပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သျောလညျးငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒ၏ဧရိယာ၌ပြင်သစ်ဇုန်အတွက်နိုင်ငံပေါင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကို၏ကန့်သတ်သည့် CFA ပြင်သစ်နိုင်ငံတန်ဖိုးများ၏အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးမထားဘူး။ ထို့ကြောင့် 90 နှစ်များတွင်အဆိုပါန့်အသတ် overdraft အပိုဒ်လျစ်လျူရှု, ပြင်သစ်အဆိုပါ CFA ဖရန့်များ၏တန်ဖိုးအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တန်ဖိုးချခြင်းကိုမပြုမီ, ပြင်သစ်ဖရန့် CFA ဆန့်ကျင် 1 50 ကုန်သွယ်။ 1994 မှာတန်ဖိုးပြီးနောက်, 1 100 FF FCFA ဆန့်ကျင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အာဏာပိုင်များသေးတန်ဖိုးနှုန်းမှာ 50% ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 100% ၏တန်ဖိုးခံယူခဲ့ရသည်!
Koulibalyဖြေ - အစုရှယ်ယာတွေကြောင့်ဘဏ္andာရေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ငွေကစီးပွားရေးကိုအစေခံရမယ်။ လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်။ ဤရည်မှန်းချက်အားဖြင့်တိုင်းပြည်များသည်အချိုးမညီသောအခက်အခဲများကိုကာကွယ်ရန်၊ မက်ခရိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဘဏ္developmentာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရမည်။
ဒါဟာကိုလိုနီထမ်းဘိုးကိုမှအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ထို CFA ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆည်းပူးကြောင်းယခုအရေးကွီး၏။ ဒါဟာအာဖရိကနိုင်ငံများလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒ၏အကျိုးဆက်များကိုထမ်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ရှိပါသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ငါတို့မူဝါဒများရွေးချယ်တာဝန်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းလုံလောက်ပါတယ်။ လွှတ်ခြင်းအခွင့်ကတာဝန်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုသာလြှငျအဓိပ်ပာယျခဲ့သညျ။
အောင်မြင်သောချိုးပြီးတာနဲ့ဟောင်းဖရန့်ဇုန်၏နိုင်ငံများတွင်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကဖန်တီးရမယ်: တစ်အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲနိုင်ငံတကာစျေးကွက်တိုက်ရိုက် access ကို, ထိုပြင်သစ်ပြောဖြစ်တယ်, တစ်ဦးကိုတက် setting အဓိကငွေကြေးဆန့်ကျင်နားမလည်အခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမပါဘဲရိုးရှင်းသောအခွန်စနစ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ငွေလဲနှုန်း။ ဒီအောင်မြင်ရန်, နိုင်ငံများတွင် options နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးအယူရိုငွေ၏နိဒါန်းမတိုင်မီဥရောပသမဂ္ဂ၏ငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကွာခြားမှုနှုန်းနှင့်အတူလွတ်လပ်သောအမျိုးသားရေးငွေကြေးဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်များပုဂ္ဂလိကနှင့်လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြောင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဘဏ်များယုံကြည်ငွေကြေးမူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါကဤသည်ဖြေရှင်းချက်သာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယ option ကိုအာဖရိကနိုင်ငံများဘုံငွေကြေးကိုစုစည်းရန်နှင့်ဖန်တီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါပေမယ့်ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာနှင့်တစ်ခုတည်းငွေကြေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးမူဝါဒကနေတစ်ခုတည်းနှင့်လွတ်လပ်သောဗဟိုဘဏ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောအစိုးရ presupposes ။
မည်သို့ပင်ဖြေရှင်းချက်မွေးစား, ပွညျထောငျစုဒီမိုကရေစီရှိရမည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေသူတို့ကိုသူတို့အခွင့်အရေးကိုထိခိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသနားတော်မူရပါမည်။ ဒါဟာအားလုံးနိုင်ငံသားများမှပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ၏တာဝနျကို, သူတို့ကိုဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေပေါ်ထွက်လာစေမည်တဲ့ဥပဒေနှင့်စတင်သည်။ အခမဲ့ကုန်သွယ်ရာကြွင်းလေသမျှပြုလိမ့်မည်။
2005 မှာတော့သင် "ကိုလိုနီစာချုပ် easements" ဟုခေါ်နေတဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျအတိုချုပ်ဤစာစောင်၏ဘာသာရပ်နှင့်ကပို့ပေးသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရှင်းပြနိုင်မလား?
Koulibalyဤစာအုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပြင်သစ် - အာဖရိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်များ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောကိုလိုနီစာချုပ်ကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိကန်နိုင်ငံများ၏လွတ်လပ်ရေးအကြိုတွင် De Gaulle လက်အောက်တွင်ပြင်သစ်မှစတင်ခဲ့သည့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထိုနိုင်ငံများ၏အရေးကိစ္စများကိုသွယ်ဝိုက်နည်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ရှည်လျားသောကိုလိုနီခေတ်ကာလ။ 1960 နှစ်များအတွင်းကိုလိုနီခေတ်ကာလအဆုံး၌ဤစာအုပ်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ကြား ၀ င်စွက်ဖက်မှုကိုစုစည်းရန်အသုံးပြုသည့်ကျမ်းများကိုထုတ်ဝေသည်။ ဒီကိုလိုနီစာချုပ်အရပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိကနိုင်ငံများမှသမ္မတများသည်ပါရီ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အညီသူတို့၏တိုင်းပြည်များကိုလမ်းညွှန်ရမည်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ထို့ကြောင့်ပြင်သစ်မှသစ္စာကျိန်ဆိုရမယ်သူကိုပြည်နယ်၏အာဖရိကန်အကြီးအကဲများ, မဟုတျဘဲသူတို့အုပ်ချုပ်သည်လူများဖို့ Elysees ထံမှအာဏာလွှဲပြောင်းအကျဉ်းချုပ်ထားသည်။
ပဲရစ်မွေးစားခံရဖို့မူဝါဒများ dictate ဖို့တာဝန်ရှိသည်။ ဤစာအုပ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူသူတို့ကိုအစားထိုးရန်ဖို့ recalcitrant ခေါင်းဆောင်များဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်အဆင်သင့်စစ်သားများနှင့်အတူကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များတကယ်ကသူတို့ရဲ့မြေပေါ်တွင်ပြင်သစ်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပြင်သစ်စကားပြောသောအာဖရိကပွညျထောငျစု obliging သာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များဘယ်လောက်မှထုတ်ဖော်ပြသ ပိုပြီး docile ။
ဤစာအုပ်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ပြင်သစ် Francophone အာဖရိက၏အပေါငျးတို့သကုန်ကြမ်းအပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီးကြောင်းတွေ့ရှ။ ကျနော်တို့ပြင်သစ်ကအာဖရိကနိုင်ငံများဖို့ "လွတ်လပ်ရေး" ပေးအပ်ပြီးနောက်အားလုံး၎င်း၏ကိုလိုနီ prerogatives ထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့သေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်ဘယ်လိုအစီအမံသင်ယူကြသည်။
ဒီကိုလိုနီခေတ်စာချုပ်မှတဆင့်, ပြင်သစ် Francophone အာဖရိကမှာပျံနံ့ကျန်ရစ်နှင့်မနေ့က၏အားသာချက်များကိုထိန်းသိမ်းထား။ ပဲရစ်ပြင်သစ်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏စစ်မှန်သောလွတ်လပ်ရေးကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့စုပေါင်းကိုလိုနီစာချုပ်ရှုတ်ချရမည်ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ 2007 အတွက်ဆီနီဂေါကသူ့ခရီးစဉ်အတွင်းအသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြင်သစ်သမ္မတ Nicolas ဆာကိုဇီကိုလိုနီခေတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပေမယ့်နောင်တရရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အာဖရိကန်စျေးကွက်အာဖရိကကိုစောင့်ရှောက်သောသူအပေါင်းတို့သည်သဘောတူညီချက်များနှင့်စနစ်များကိုရှုတ်ချရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီခေတ်စာချုပ်အာဖရိကပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိုးဖောက်။
Koulibaly: ထင်တာပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ခံယူချက်ကိုအာဖရိကသားများစွာနှင့်မျှဝေချင်သည်။ ထို့အပြင်အာဖရိကမှသူငယ်ချင်းများ၊ သူတို့သည်ကိုလိုနီစာချုပ်၊ နိုင်ငံ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမြင့်ဆုံးသောအချက်များကိုတိုင်းတာရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားတွင်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ကိုလိုနီခေတ်စာချုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လက်ကမ်းစာစောင်ငါတို့မလိုချင်ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြproblemနာကပိုက်ဆံမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေချနေထိုင်သူများမှကင်းကွာနေသောကျွန်ုပ်တို့၏မြေများနှင့်သယံဇာတများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကို ဦး စွာရှင်းလင်းစွာတောင်းဆိုရမည်ကိုယုံကြည်ပြီးကိုလိုနီစာချုပ်ကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အာဖရိကကိုတစ် ဦး ချင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြည်နယ်ထိန်းချုပ်မှုကန့်သတ်ချက်၊ လွတ်လပ်သောစျေးကွက်တွေ၊ ပွင့်လင်းတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။ နှင့်မူဝါဒလေးစားသည်။
နယူးအာဖရိက, ဇန်နဝါရီလ 2008 အတွက်
€2ကနေ 10,50 အသစ်
2 5,25 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 10,50 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 30, 2021 7:55 pm တွင် updated
မဟာအစိမ်းရောင်နံရံ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၂၀)
လျှို့ဝှက်အယူဝါဒ - HP Blavatsky (PDF)